Guddoomiyaha gobolka Nugaal oo ku dhaawacmay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiyaha gobolka Nugaal oo ku dhaawacmay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Garoowe
Guddoomiyaha gobolka Nugaal oo ku dhaawacmay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Garoowe
March 29, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi ayaa ku dhaawacmay qarax caawa fiidkii ka dhacay gudaha magaalada Garoowe
Qaraxa oo ahaa qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qaxiyay gaariga guddoomiyaha xilli uu marayay bartamaha magaalada gaar ahaan meel u dhow saldhiga ciidaanka booliiska Garoowe, sida warsidaha Puntland Mirror ay u sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Guddoomiyaha ayaa la geeyay isbitaalka Garoowe halkaas oo hadda xaaladiisa lagula tacaalayo.
Saddex qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Garoowe, sida ay ku warantay Radio Al Andalus oo taageerta maleeshiyada.
March 30, 2020 Guddoomiyihii gobolka Nugaal oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah
Shaqooyin ka Bannaan Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland
Maxkamada ciidamadda Soomaaliya oo dil toogasho ah ku xukuntay mid kamid ah shan qof oo loo heystay qaraxii Zoobe
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamadda Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah dil toogasho ah ku xukuntay mid kamid ah shan qof oo loo heystay qaraxii Zoobe, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamada Gaashaanle Xasan Nuur Cali Shuute. [...]
Labo qof oo ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada Somaliland ku fureen dad shacab ah magaalada Laascaanood
Laascaanood-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Laascaanood maanta oo Khamiis ah. Ilo-wareedyo ku sugan Laascaanood ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in isku dhac dhexmaray ciidamada maamulka Somaliland iyo dadka shacabka [...]